ikhaya » iindaba » Abaxhamli be-Hybrik kunye neDolby Laboratories ukudibanisa iNkxaso yeCodby Umbhalo wokuBhala ngeNkcukacha kwiNkqubo yeNkqubo yeNkcazo
Abaxhamli be-Hybrik kunye neDolby Laboratories ukudibanisa iNkxaso yeCodby Umbhalo wokuBhala ngeNkcukacha kwiNkqubo yeNkqubo yeNkcazo
I-Mountain View, i-Calif. I-Hybrik, Inc. namhlanje ivakalise izicwangciso zokudibanisa inkxaso yeDolby Vision ™ yokudibanisa kwiqonga layo elisekelwe kwifu. Le ntsebenziswano yenza isisombululo esifikelelekileyo kunye neendleko ngokukhawuleza kokuhanjiswa kweMolby Umbonomxholo, kunye nokunyaniseka kwe-AWS yamafu e-Amazon.
Umbono weDolby utshintshe amava e-TV ekhaya ngokunikela ukukhanya okukhulu kunye nokuphambana, kunye nepelette epheleleyo yembala ecebileyo. Njengoko ukukhethwa komsebenzi okhethekileyo we-HDR kwii-studios ezinkulu kunye nenani elikhulayo lokudala, kwaye njengokwanda kwezinto eziphilayo kwenza ukusetyenziswa okusebenzayo kwezixhobo zokudalwa kokuqukethwe kweDolby, abathengi baya kufumana uluhlu olukhulayo lwe-HDR.
"I-Dolby Vision iyaqhubeka nokwakha umgangatho njengoko ifomati ye-HDR yokuqala yokuthumela" kutsho uRon Geller, VP, Ulwalamano loMhlaba wonke, IDolby Laboratories. "Intsebenziswano yethu kunye neHybrik inikezela ekuzibopheleleni kukaDolby ukwenza inkqubo yekhowudi yokudibanisa imixholo yeDolby ifumaneke ngokubanzi kubaboneleli benkonzo kulo lonke shishini."
I-platform ye-Hybrik ye-cross-scale transcoding isetyenziswe ngamanye amaqela amakhulu eendaba kwihlabathi. Inkonzo yayo isekelwe kwi-platform ye-AWS yamafu ye-Amazon kwaye inikezela ukuhamba nge-transcoding, ukulawula umgangatho, ukuhanjiswa kwefayile ngokukhawuleza, ukugcinwa kwamanqaku amakhulu, kunye nokusabalalisa ukuhambisa ividiyo ebalulekileyo kwi-skrini nganye.
"Sinikeza amavaji aphezulu kumthengi kubaxhasi bethu ngendlela ephucula ngayo ixesha labo ekuthengiseni." Uthi Andy Shenkler, EVP kunye neCandelo leZisombululo zeNtloko kunye neTeknoloji, Sony I-DADC i-New Media Solutions. "Kwakunjalo ngenjongo yengqondo ukuba ekuqaleni sadibanisa iHybrik njengendlela yethu yokucwangcisa ngokuqulathekileyo. Ukongezwa kwe-Hybrik yeDolby Vision kusenza sikwazi ukuqhubela phambili ukukhawuleza iimfuno zabaxhasi bethu ngokubambisana. "
Ngokusekelwe kwi-Mountain View, i-Calif., I-Hybrik iyinqanaba elitsha kwi-based based-based media management management. Inkonzo yethu epheleleyo ibiza ngexabiso ngempumelelo ikhutshwe i-video nganye kwesikrini kunye ne-transcoding edibeneyo, ukulawula umgangatho, ukudluliselwa kwefayile ngokukhawuleza, ukugcinwa kwamanani amakhulu kunye nokusakaza. Funda ngakumbi kwiWww.hybrik.com.
Amazon AWS Ubuchwepheshe befu Umbono weDolby Hybrik I-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa ingxolo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, ukunciphisa i-bitrate, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw Transcoding Inkundla ye-Ultra HD	2017-09-12
Previous: I-NUGEN Ukubonwa kweeNkcazo zokuPhathwa kweeNtsha zeeDrayby eziFomathiweyo kunye neMiboniso yeHalo Upmix 3D I-Immersive Option kwi-IBC 2017
Hey Buddy !, Ndifumene le ngcaciso kuwe: "Abaxhamli be-Hybrik kunye neDolby Laboratories ukudibanisa iNkxaso ye-Dolby Vision Encoding Support kwi-Cloud Platform". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/hybrik-partners-with-dolby-laboratories-to-integrate-dolby-vision-encoding-support-in-its-cloud-platform/. Enkosi.